Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Axmed Karaash ” Muuse Biixi Cunaqabatayn ma saari karo Sanaag” -
HomeWararkaMadaxweyne Ku Xigeenka Puntland Axmed Karaash ” Muuse Biixi Cunaqabatayn ma saari karo Sanaag”
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Axmed Karaash ” Muuse Biixi Cunaqabatayn ma saari karo Sanaag”
June 6, 2019 F.G Wararka 0
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegay in Somaliland aysan awood u laheyn in ay Cunaqabateyn kusoo rogto degaanada ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag.
“Arrin aan maqlay oo Muuse Biixi la yiri cunaqabatayn ayuu ku soo rogay Sanaag, waa arin lala yaabo weeye, Cunaqabatayn mana saari karo, Alle ‘SWC’-na ma saarin. Waxaan farayaa Hay’ddaha uu beenta u sheegayey iyo dowladda Puntland-ba in si deg deg ah looga hortago arrintaasi been Abuuur ka ah”. Ayuu yiri Madaxweyne Axmed Karaash.
”Shabaabka uu leeyay Dhahar ayay joogaan, Shabaab Puntland ma joogto mana taageerto, Shabaab iyo Puntland waa kuwa dagaalku ka dhexeeyo har iyo habeenba, waxaanu leenahay meesha lagu badbaadiyo waa Soomaaliland, xariiq ma gaarsiin reer Burco iyo reer Hargeysa iyo Jeegaanta Midna, halkanna dagaalka ka dhex socda waad la socotaan, markaa Shabaab anagu ma haynee halkaas ayay jiraan, Soomaliland ayaa laga soo taakuleeya.” Ayuu yiri Madaxweyne Karaash.
Wali ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Somaliland oo ku aadan eedeynta kaga timid maamulka Puntland, laakiinse waxaa xusid mudan in labadda maamul uu ka dhaxeeyo dagaal iyo Muran ku saabsan gobolka Sanaag.